कति पुग्यो डलर र दिनारको भाउ? यस्तो छ आजको विनिमय दर :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
कति पुग्यो डलर र दिनारको भाउ? यस्तो छ आजको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ।
आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२३ रूपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १२३ रूपैयाँ ८९ पैसा पुगेको छ। यसको बिक्रीदर भने १२३ रूपैयाँ ८९ पैसा पुगेको छ। त्यस्तै, बिहीबार युरोपियन युरो एकको खरिददर भने १३० रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १३० रूपैयाँ ८० पैसा पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले आज अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदमा ८६ रूपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीमा ८६ रूपैयाँ ७७ पैसा तोकेको छ। क्यानेडियन डलर एकको खरिददर भने ९५ रूपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ९५ रूपैयाँ ५३ पैसा पुगेको छ।
आज साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदमा ३२ रूपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीमा ३३ रूपैयाँ ०३ पैसा पाइन्छ भने कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रूपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३३ रूपैयाँ ९३ पैसा पुगेको छ।
यता युएई दिराम एकको खरिददर बिहीबार ३३ रूपैयाँ ५७ पेसा र बिक्रीदर ३३ रूपैयाँ ७३ पैसा कायम गरिएको छ। मलेसियन रिंगिट एकको खरिदमा २८ रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीमा २८ रूपैयाँ ३१ पैसा पाइन्छ।
आज राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कुवेती दिनार एकको खरिददर ४०१ रूपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ४०३ रूपैयाँ ८० पैसा पुगेको छ। बहराइन दिनार एकको खरिदमा भने ३२७ रूपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीमा ३२८ रूपैयाँमा ६३ पैसा कायम गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकल र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्धारण गर्ने विदेशी मुद्राको विनिमय दर फरक हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तर भारतीय मुद्राको विनिमय दर भने नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम नै हुन्छ, जुन अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सक्दैनन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २९, २०७९, ११:१४:००
सातामा सय अंकले बढ्यो नेप्से
कसरी पाउनेछन् वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले सेयर?
अपर हेवा खोला हाइड्रोपावरले आइपिओ जारी गर्दै, कस्तो छ कम्पनी?
कुवेती दिनार एकको बिक्रीमा ४०४ रूपैयाँ ७२ पैसा, यस्तो छ आजको विनिमय दर